Goatemala: Firaisankina ho an’i Haiti taorian’ny horohorontany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2018 13:15 GMT
Tamin'ny taona 1976, nisy horohorontany nahery vaika izay nahafatesana Goatemalteka maherin'ny 23.000, vahoaka mahantra sy indizeny monina amin'ny trano bongo sy any amin'ny faritra mahantra hafa ny ankamaroan'izy ireo. Nandritra izany fotoana izany, maro ireo olona manerana izao tontolo izao no tsy nahafantatra ny fahantrana sy ny fahasamihafana goavana tao Goatemalà. Taorian'ny voina anefa dia nahatonga ny fitomboan'ny fikambanana tany amn'ny faritra ambanivohitra sy an-drenivohitra ny fananganana indray ny vondrona sy ny fahatongavan'ireo fiaraha-mientana iraisam-pirenena goavana. Niray hina noho izany ny Goatemalteka mba hijoro amin'ny firaisan-kina miaraka amin'ireo mponina tao Haiti. Natao hanohanana ny fanampiana ireo niharam-boina tamin'ny horohorontany tany Haiti ny ezaka maro samihafa avy amin'ny vondrom-piarahamonina samihafa .
Tanànan'i Goatemala taorian'ny horohorontany tamin'ny taona 1976 (sary tao amin'ny Sehatra azon'ny rehera ampiasaina).
Nitatitra i El Zacapaneco fa tao Gualan, izay tanànakely ambanivohitra iray kely fidirambola dia nivory mba hikarakara tolo-tanana, ary nanangonan'izy ireo hatramin'ny 2.500 dolara Amerikana, sy fanomezana maro ihany koa ny fampitam-baovao, ny onjam-peo ary ny fahitalavitra tao an-toerana. Nanasa ny olona hanolotra fanomezana sy fanampiana ihany koa i El Poptuneco (ao Poptún, Petén) . Nanasa ny olona avy amin'ny fiangonana Protestanta mba hiara-miasa amin'ny maha-Kristiana tsara fanahy azy ireo ary hampiseho ny fitiavany ireo Haitiana ny bilaogy Cultura Cristiana. Nanasa olona avy amin'ny fivavahana rehetra mba hivavaka ho an'i Haiti ny Noticias La Esfinge avy any Coban.
Niara-miasa tsy tapaka tamin'ny mpampandry tany an'ny Firenena Mikambana ny Tafika Goatemalteka. Nanana vondrona maro nalefa tao Haiti izy ireo, ary araka izay haingana vitan'ny Governemanta, dia nandefa Vondron-tafika Manokana hanao Fanampiana Ara-tsosialy sy Vonjy Aina izy ireo araka ny tatitra nataon'ny bilaogy Perspectiva Militar. Ankoatra izay, dia nisy alika berger allemand efa nampiofanina nanao dia niaraka tamin'ny Tafika mba hanampy azy ireo hitady ireo niharan-doza. Nitatitra ihany koa ny bilaogy izay nanome vaovao momba ny Mpamonjy Voina Goatemalteka fa nisy vondron-tafika manokana nalefa haingana tany amin'ny nosy. Nanoritsoritra ireo safidy azon'ny Goatemalteka hanampiana tao amin'ny lahatsorany Ampio i Haiti i Sensluze ao amin'ny bilaogy Banana Smoothie!
Nanoratra tononkalo natokana ho an'i Haïti i Walter González avy ao amin'ny bilaogy Guatemala en Decimas, tahaka ny nataon'i Oxwell77 tao amin'ny bilaogy Guatezona izay nanoratra tononkalo ihany koa. Niady hevitra betsaka momba ny fomba tsara indrindra hanampiana ireo olona voakasika tamin'ilay voina ny RockRepublik, ilay fikambanan'ny mpankafy hira rock lehibe indrindra ao amin'ny firenena .
Raha jerena ny loza nitranga tany Haïti sady fampatsiahivana ny horohorontany tao Goatemala 30 taona mahery lasa izay dia nanome torolalana mazava tsara momba ny zavatra hatao mialoha, mandritra sy aorian'ny horohorontany ny bilaogy avy ao amin'ny Tobin'ny famonoana afo ao Antigua, Guatemala .
Farany, nitatitra momba ny voina i Alejandro Ramírez, mpamokatra horonantsary Goatemalteka monina any Haiti. Nanoratra taratasy misokatra izay nalefany tany amin'ny Havana Times izy :
Nandeha teny an-dàlamben'i Jacmel rehetra aho—niaraka tamin'ireo fakantsariko anankiroa izay nahantoko teo an-tendako—tsy nahatsapa herisetra na dia kely akory aza na nahatsikaritra fijery hafahafa (zavatra tsy azoko atao ao an-tanandehiben'i Goatemalà City na Caracas). Nandray ahy tamim-pitiavana ny tanàndehibe iray manontolo ary nitondra ahy tany amin'ny faritra faran'izay nahitana olana henjana mihitsy aza. Nalahelo aho noho ny tsy fahaizako teny Kreôla na Frantsay, satria nitantara tantara izay tsy azoko ireo mponina. Na izany aza dia maro ireo Haitiana niteny Espaniola ary afaka nampita ny fihetseham-pony tamiko, ilay lehilahy fotsy hoditra tsy fantatra izay nananika ny toerany.
Koa ahoana no ahafahan'ny fampahalalam-baovao miteny fa loza daholo ny zava-drehetra raha misy ny fo maro mahatsangan-tendrombohitra mitempo fihetsem-pon'olombelona amin'ny firaisankina, izay tsikaritra hatrany eo amin'ireo izay tsy manana izany? Ary amin'izany fotoana izany ity tanàndehibe ity dia mety iray amin'ilay sady ahitana ny kely indrindra – sy ny lehibe indrindra.